Yintoni eNtsha kwi-AutoCAD, iArcGIS, kunye neMephu yeHlabathi-iGeofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Yintoni entsha kwi-AutoCAD, i-ArcGIS kunye ne-Global Mapper
I-Plugin ye-ArcGIS ye-AutoCAD
I-ESRI isiqalise isixhobo sokujonga idatha ye-ArcGIS kwi-AutoCAD, exhomekeke njengetye entsha kwiRibhoni kwaye ayifuni ukuba nelayisenisi ye-ArcGIS okanye inkqubo efakiwe.
Isebenza ngeenguqulelo ze-AutoCAD 2010 ukuya kwi-AutoCAD 2012, khange bathethe nto nge-AutoCAD 2013. Kwiinguqulelo zika-2009 okanye ngaphambili, kwakhiwa i-200 Service Pack 1 iyafuneka.
Sukuba nemincili kakhulu njengoko ingafundi umaleko oqhelekileyo njenge-WMS, iWFS, kungasathethwa ke nge-ESRI MXD okanye iGeodatabase. Oko ikufundayo yidatha enikezelwa ngeSeva yeArcGIS, nokuba ikwinkonzo yenethiwekhi yendawo, kwi-Intanethi, nakwii-online ArcGIS online. Kwabo kuthi bajonga umgama phakathi kwe-CAD kunye ne-GIS, siyaqonda ukuba linyathelo elibalulekileyo kunye nephupha elilindelweyo, kuba i-AutoCAD inxibelelana namanqanaba anezinto ezivela kwi-ArcGIS ngaphandle kokungenisa okanye ukuguqula.
Imisebenzi sisiseko, layisha iimephu, maleko ohlukeneyo, cima, vula, yenza elubala, ubuze idatha yethabhula. Ukuba inkonzo iqulunqiwe, i-tabular kunye ne-vector yedatha evela kwindawo yeshishini ye-geodatabase inokuhlelwa, kodwa oku kuya kufuneka kuchazwe kwi-GIS Server. Iyaqaphela ingqikelelo, zombini ifayile yeprpr kunye neyenye enokuchazwa kwi-AutoCAD. Iimpawu zinokunikezelwa kwidatha ye-CAD kunye ne-inshurensi nge-lisp iya kuba nakho ukunxibelelana ngakumbi.
Ngokukodwa, ngaphandle kokuba sisisiseko, kubonakala ngathi ngumzamo olungileyo, kuba ngaphambili, ngaphandle kokuba usebenzise iMephu ye-AutoCAD okanye i-Civil3D, kuye kwafuneka uguqule idatha yevektha ibe yifomathi ye-dwg kwaye uphulukane neetabhula.
Kwaye ngenxa yokuba ikhululekile, akubi.
Landa i-ArcGIS ye-AutoCAD
Yiyiphi i-Map Map 14 eya kuzisa
Phakathi koSeptemba i-14 inguqu ye-Global Mapper iza kuqaliswa, nje kuphela emva kwenguqu ye-13 ephuma kuyo sathetha ngelo xesha.
Ngokuqinisekileyo kuya kuba nelinye iqela elithile, kodwa kwinto esiyijikile ngayo i-Beta version efumaneka ukukhuphela, oku kuyingqungquthela:
Kwi-Global Mapper 13 babandakanye ukubanakho ukufunda i-ESRI Geodatabase. Ngoku i-ESRI ArcSDE, kunye neefayile eziqhelekileyo ze-ESRI kunye neeGeodatabases zobuqu, ngoku zinokuhlelwa phantse ngokwendalo. Kuyafana nokwenziwa nge-MySQL, i-Oracle Spatial, kunye ne-PostGIS yolwazi.
Kwinqanaba lomsebenzi womyalelo, inani elincinci lokulungelelaniswa lenziwe ukwenzela ukuba inkinobho yemigca ebonakalayo ebonakalayo ibonakaliswe kunye nokufikelela kwiindlela eziqhelekileyo okanye ezinxulumene noko kwenziwa.
Kwizahlulo zemihlaba yendawo yedijithali, eyona nto ibaluleke kakhulu, ukuphathwa kwamamenyu kuye kwaphuculwa ukudala iikali, ukuhlanganiswa kweendawo, izityalo zokuhlamba kunye nezinye izixhobo.
Ukukwazi ukubala ivolumu phakathi kweendawo ezimbini zomhlaba kunye nemigca yokukhawulela ukudiliza ummandla uye wongezwa.
Inkxaso yeeNkonzo zeMpawu zeWebhu (WFS) kwinqanaba lomxhasi.
Iyakuthunyelwa kwi-CADRG / CIB, ASRP / ADRG kunye neefayile ze-Garmin JNX
Ukukhangela kunokwenziwa ngokuhlukileyo
Ngoku kunokwenzeka ukwenza imisebenzi esisiseko engenazo iinkqubo ze-GIS, njengokujikeleza simahla, ngaphandle kokuchaza iiparameter kodwa kubhabho, njengoko kusenziwa kwi-CAD. Sika iipoligoni ezininzi ukusuka kumgca, uhlobo lweTrim, ayinamsebenzi ukuba azisikwanga kwindiza enye.
Ikopi - unamathelwano unokwenziwa kwindlela yokukhetha, khetha oko ufunayo, fumana ugcino olujoliswe kuyo, lwenze unamathisele kwaye uhambe.
Siza kufuneka sibone ukuba yintoni le, kodwa bathetha ngokubala kweendleko zokuthengiswa kwedatha, ngokusekelwe kwindawo yokuthumela ngaphandle kunye nesisombululo esichaziweyo.
Kwaye ke, kulindelwe ukuba kufumaneke iifom ezintsha ezininzi, kwiyiphi i-Global Mapper ayifumaneki, ingeniso entsha kunye neefomasi.
Ukusuka apha unako ukukhuphela inguqulo ye-beta, efakwe njengenguqu efanayo ngaphandle kokuchaphazela kwangaphambili esiyifake.
jorge quintero uthi:
Ukuba unako, ndincede ngokufakela inkqubo.
Givanildo Sosa uthi:
Buenas: unokuzama le link http://www.youtube.com/watch?v=p0MhE3kSLIY Kukho inkcazelo enhle kakhulu yokusetyenziswa (kwiseNgesi).
Sawubona, ke uxolisa, unayo inkambo okanye incwadi ye-Arcgis ye-AurtoCad 2010-2012 ukususela kwangoko ndayilanda kwaye ndayifakela kodwa andazi indlela yokuyisebenzisa. Ndiyathemba kwaye unokunceda umhlobo g!
molo, ungathumela amanyathelo okufaka i-Global mapper ye-byts ezingama-64 ... enkosi